PLAE III Boeny: mahomby ny fambolen-kazo hiadiana amin’ny fikaohan-driaka | Région Boeny
Ny talata 14 Aprily lasa teo, dia nidina ifotony ny Komitim-paritra mpanara-maso na CORES (Comité régional de suivi) miara-miasa amin’ny Fandaharan’asa faha-III miady amin’ny fikaohan-driaka ny nofon-tany na PLAE III (Plan de lutte anti-érosive) nijery ireo asa vitan’ity farany.
Ankoatra ny fanaraha-maso dia mandray anjara amin’ny fankatoavana sy fandrindrana ny asan’ny PLAE III ny CORES. Nitsidika ireo fambolen-kazo azo avadika ho angovo ataon’ny tantsaha izy araka izany, izay tetik’asa vatsin’ny fikambanana alemaina KfW vola mitentina dimy tapitrisa euros.
Taorian’ny fahataperan’ny fotoam-pambolen-kazo 2015 ho an’ity taom-piasana voalohany ity dia tao amin’ny Kaominina Manerinerina, Ambondromamy, ao amin’ny distrikan’Ambato Boeny, ary tao Ankazomborona, distrikan’i Marovoay no nanatanterahana ny fitsidihina. Fantatra ary fa 90%n’ireo zanakazo novolena tamina velaran-tany 596ha dia velona avokoa hatreto. Ny volana okotobra ho avy izao vao tena ho fantatra tanteraka ny isan’ireo zanakazo velona sy maty.
Ny tanjon’ ny PLAE III dia hamboly zana-kazo miisa 953 600 amina velaran-tany 2 500ha anatin’ny efa-taona izay hotanterahan’ireo Vondron’ny tantsaha miisa 43, misy mpikambana 600 miara-miasa amin’ny PLAE III.
Ankilan’izay dia misy enina ireo asa goavana ataon’ity Fandaharan’asa ity mikasika ny ady amin’ny fikaohan-driaka ny nofon-tany ka velaran-tany 2 000ha no kendreny hotratrarina ho arovana sy harenina amin’izany. Ka velaran-tany 350ha no tanjona amin’ity taona ity.
Marihina fa isan’ny tetik’asa iray ao anatin’ny fandaharan’asa PLAE ny raharaha fananan-tany. Ao anatin’izany ny fanohanana ny fampandehanana ny Birao Ifoton’ny fananan-tany eny anivon’ireo Kaominina miisa 19 ao amin’ny distrikan’i Mahajanga II, Ambato-Boeny ary Marovoay, mba hanamorana ny fahazahoan’ireo tantsaha kara-tany ara-dalàna hahafahan’izy reo miasa sy mamokatra am-pitoniana.
Nitohy tao min’ny Hôtel du Phare, teny La Corniche Mahajanga, ny asan’ny CORES. Fikaonandoha niaraka amin’ireo tantsaha mikasika ireo zava-bita sy ny firosoana amin’ny asa araka ny tanjona napetraky ny PLAE III no natao tamin’izany.
Tsiahivina fa ny 22 Septambra 2014 no nananganana ny Komitim-paritra mpanara-maso ny fankatoavana sy ny fandrindrana ny asa ny PLAE III ary ny Lehiben’ny Faritra Boeny no filoha mpitarika azy hatramin’izao.